Zvinonzwisisika: Muchinjikwa-Chiteshi Kukura Kushambadzira Platform Martech Zone
NeChishanu, Gunyana 13, 2019 NeChishanu, Gunyana 13, 2019 Douglas Karr
Chinyakare chikuva chekushambadzira chinogonesa chinogadzira mabhenji ekugadzira, kuita uye nekukwirisa macross-chiteshi mishandirapamwe. Mabhiza anotungamira, seZillow, SeatGeek, uye Bhokisi, sarudza Iterable kumisikidza vatengi kuita mubhizimusi mukati mehupenyu hwese nezvakakurudzirwa zvemukati uye zvisingaenzaniswi data kuchinjika.
Inochinjika Muchinjikwa-Chiteshi Mutengi Engagement
Zvepasi-kirasi zvevatengi zviitiko zvinotanga nezvikamu zvishanu zvakakosha zvekukura kwekushambadzira kubudirira: kuzivikanwa kwevateereri, inochinjika dhata yekusanganisa, lifecycle mushandirapamwe kuumbwa, hunhu-hwakavakirwa pamunhu uye kuita kwekuita.
Chikamu Chisinganzwisisike cheVateereri
Nzwisisa zvese zvevatengi zvakasarudzika hunhu uye zvavanofarira nekuchengetedza mazana ehuwandu uye echinyakare data data minda kune yega yega mushandisi chimiro. Zvine simba chikamu chako vanyori vanonyorera zvakanyanya mushandirapamwe, wobva wagadzira vateereri vakafanana uye vadzokerezve vashandisi pane vezvenhau.
Iterable Dhata Kubatanidzwa
Revera vese vanyoreri vako 'huwandu hwevanhu, hunhu uye chiitiko chiitiko - zvese zvemukati uye kubva kune vechitatu mapato - munguva chaiyo yekutanga mameseji akasarudzika nemishandirapamwe.
Iterable inochinjika dhata modhi, emazuva ano maAPIs uye epasi rese webhooks anotora ruzivo kubva kune chero sosi padanho risingaperi chiyero.
Iterable Lifecycle Campaign Kurongwa
Dhizaina mishandirapamwe yekushambadzira, uye inokonzeresa mameseji akakodzera paemail, nharembozha, SMS, in-app, webhu Push, yakananga tsamba, kugadzirisazve munharaunda nezvimwe.
Iterable yekudhonza-uye-kudonhedza Workflow Studio inokutendera iwe kuti uwedzere mafirita, ronga kunonoka, otomatiki zvinokonzeresa uye kumisikidza mameseji mune imwechete chikuva
Iterable Maitiro-Akavakirwa Pamunhu
Fambisa hurukuro dzekudyidzana neumwe neumwe mutengi nekugadzira mameseji akanangana zvakanyanya ayo akasarudzika kwavari, munguva iyoyo, chero kwavanenge vari.
Gadzira zvakasarudzika, zvine simba zvemukati neIterable inyore-kushandisa template inovaka, advanced handlebars logic, dhata feeds, uye zvakaenzana zvidimbu.
Iterable Catalog Yemukati Kusarudzika
Catalog ndiyo metadata-inotungamirwa yakasarudzika injini. NeIterable Catalog, vatengesi vanokwanisa kugadzira zvakadzama mameseji zviitiko zvakatorwa kubva kune yekutanga-bato data revatengi-zvese kubva kune yako pachako nhoroondo maficha kusvika kune asina hunhu hunhu hunodiwa. Catalog inoshandisa iyo yakazara hupamhi hwedata iri mune yekushambadzira stack, zvichiita kuti zvive nyore kune vashambadzi kuti vagadzire nyore kushambadzira kushambadzira zviitiko zvinoshanda pane rese revatengi dhatabhesi-yakaenzana chiyero.
Tisati tashandisa Catalog, app yedu yaive yakangogumira pakupa generic pamusoro 5 rondedzero yenzvimbo dzemisasa mudunhu rega rega sekurudziro. Isu takanga tisina simba rekukurudzira zvine simba nzvimbo dzemisasa kune vashandisi zvinoenderana nemaprofayiri avo. Mushure mekuitwa kwedu kweKatalog, isu rese danho rekushambadzira rakachinja kutamba mutambi wemusasa mumwechete nevashandisi vedu-kuvhara musiyano uripo pakati pemusasa nenzvimbo yemusasa. Isu takakwanisa kukamura munzira dzisati dzamboonekwa. Isu hatina chete kukwanisa kuwedzera kugona kwedu kukurudzira nzvimbo dzemisasa, asi zvakare kupa yakawanda yakatarisana nhandare yemisasa kune wega mushandisi.
Anthony Easton, Musoro weVateereri Kuvandudza pa Kudzvinyirira
Iterable Insights yakagadzirirwa kuti ikubatsire kuona mishandirapamwe yako, kuongorora mashandiro ako, uye iterate nekukurumidza. Sarudza kubva pamhando dzinoverengeka dzakasiyana dzechati, ipa runyorwa rwekushambadzira uye wedzera mushandirapamwe wako kubudirira nemishumo yetsika nemadhodhi.
Ongororo dzinovandudza matanho akasimba emushandirapamwe kuburikidza nekuyedza kwakasimba kweA / B uye bvunzo dze multivariate dzinosarudzira otomatiki izvo zvinokunda zvemukati kuti zviwedzere kuvhura, kudzvanya nekutendeuka.
Ronga iyo Inonzwisisika Demo
Tsananguro: Gadziridza odhiyo Uchishandisa Chinyorwa